Ny fiovan'ny toetrandro dia hahatonga ny rojom-bokatra tsy dia mahomby | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Ny fiovan'ny toetrandro dia hahatonga ny rojom-pifandraisana tsy hahomby
Ny fiovan'ny toetrandro dia misy fiatraikany ratsy amin'ny harena voajanahary, ala, zanak'olombelona ary, amin'ny ankapobeny, amin'ny harena voajanahary. Mety hisy fiatraikany mivantana amin'ny alàlan'ny fampihenana na miharatsy loharanom-pahalalana na tsy mivantana amin'ny alàlan'ny rojom-pisakafoanana.
Amin'ity tranga ity dia hiresaka momba izany isika ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro eo amin'ny sehatry ny sakafo. Inona no fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny rojom-pisakafoanana sy amintsika?
1 Fianarana momba ny rojo sakafo
2 Ireo tena tratry ny fiovan'ny toetrandro
Fianarana momba ny rojo sakafo
Ny fikarohana dia natao tao amin'ny University of Adelaide izay nahitana ny fiovan'ny toetrandro mampihena ny fahombiazan'ny rojo sakafo satria ny biby mampihena ny fahafahany manararaotra harena. Nasongadin'ny fikarohana fa ny fitomboan'ny CO2 dia tompon'andraikitra amin'ny asidra ary io fampitomboana io no hampitombo ny famokarana amin'ny faritra maro amin'ny rojo.
Ankoatr'ity fikarohana ity dia nanapa-kevitra ihany koa fa ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny rano dia hanafoana ny famokarana amin'ny faritra hafa amin'ny rojom-pisakafoanana. Izany dia vokatry ny fihenjanana ateraky ny biby an-dranomasina. Izany no antony hisian'ny olana tsikelikely amin'ny faritry ny sakafo izany no hiteraka fandravana azy.
Ity fihenan'ny rojom-pisakafoanana ity dia mety hisy vokany lehibe eo amin'ny tontolo iainana an-dranomasina, satria amin'ny ho avy dia hanome trondro vitsy kokoa hohanin'ny olombelona sy ho an'ny biby an-dranomasina izay any amin'ny faritra avo indrindra amin'ny rojo ny ranomasina.
Ireo tena tratry ny fiovan'ny toetrandro
Mba hahitana ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny rojom-pisakafoanana, ny fikarohana dia namerina ny rojom-pisakafoanana tsara indrindra, nanomboka tamin'ny zavamaniry mila hazavana sy otrikaina hitombo, invertebrata kely ary trondro mpiremby sasany. Ao amin'ny simulateur, ity rojom-pisakafoanana ity dia niharan'ny hafanan'ny asidra sy ny fiakaran'ny maripana mitovy amin'ny andrasana tamin'ny faran'ny taonjato. Ny valiny dia ny fifangaroan'ny gazy karbonika avo lenta izay nampiroborobo ny zavamaniry. Arakaraka ny maha-zavamaniry azy, ny invertebrata kely kokoa ary ny invertebrata, ny trondro dia afaka mitombo haingana kokoa.
Na izany aza, ny fiakaran'ny hafanan'ny rano tsy miova no miteraka ny trondro dia mpihinana tsy mahomby ka tsy afaka manararaotra ny angovo fanampiny ateraky ny zavamaniry izy ireo. Izany no mahatonga ny trondro ho noana ary rehefa mihabe ny mari-pana dia manomboka manimba ny rembiny izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fiovan'ny toe-trandro » Ny fiovan'ny toetrandro dia hahatonga ny rojom-pifandraisana tsy hahomby
Inona avy ireo toerana misy tadio indrindra eto an-tany?
Ankizy 175 tapitrisa no tratry ny fiovan'ny toetrandro isan-taona